होलीको टीसर्ट १ रुपैयाँमा ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/होलीको टीसर्ट १ रुपैयाँमा !
मोबाइल एप रिचार्जरले होलीको अवसर पारेर रिचार्जरले १ रुपैंयामा होलीको टीसर्ट उपलब्ध गराउने भएको छ।रङहरुको पर्व होलीलाई हर्षोल्लास बनाउनुका साथै आफ्नो ब्राण्ड प्रवद्र्धनका लागि होलीको थिमयुक्त टीसर्ट १ रुपैंयाँमा उपलब्ध गराउने अफर ल्याएको रिचार्जरले जनाएको छ। रिचार्जरका अनुसार फागुन २३ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म रिचार्जरको मोबाइल एपबाट टीसर्ट खरिद गर्नु पर्नेछ । १ रुपैंयामा टीसर्ट खरिद गर्नका लागि रिचार्जरमा रहेको आफ्नो खाताबाट २४९ क्यास प्वाईन्ट भने प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। अर्थात २४९ क्यास प्वाईन्ट र १ रुपैंया भुक्तान गरेर टीसर्ट किन्न सकिन्छ।
गुगल प्ले तथा एप्पलको एप स्टोरबाट रिचार्जर डाउनलोड गरी एकाउण्ट खोले पछि प्रयोगकर्ताले तत्कालै एक सय क्यास प्वाइन्ट पाउने छन्। रिचार्जरबाट जतिको मोबाइल रिचार्ज गर्यो त्यति नै क्यास प्वाईन्ट पाइने छ। क्यास प्वाईन्टलाई रिचार्जरबाट सामान खरिद गर्दा डिस्काउण्ट भौचरका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
मोबाइल रिचार्ज गर्दा, सिनेमा, बस र हवाई टिकट खरिद गर्दा वा अनलाइनबाट सपिंङ गर्दा दुई दर्जन बैंकको इ बैंकिंग, इसेवा लगायतका पेमेण्ट गेटवेका साथै मास्टर तथा भिसाका डेविट र क्रेडिट कार्डबाट सिधै पैसा तिर्न सक्ने व्यवस्था रिचार्जरले गरेको छ।
ग्याजेटस् तथा ईलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु रिचार्जरबाट शुन्य प्रतिशत व्याजदरमा किस्ताबन्दीमा किन्न सकिन्छ । रिर्चाजरले ‘नेपाली लाई नेपाल घुमाउने’ नाराका साथ सस्तो मुल्यमा टुर प्याकेज साथै हेलि राईड उपलब्ध गराईरहेको छ। पोखराको साईड सिन हेलिकप्टर बाट ५ हजार ९९९ रुपैयाँमा मात्र उपलब्ध गराइरहेको कम्पनीले जनाएको छ।
रिचार्जर एपमा मेबाईल, ल्यापटप, टिभी , फ्रिज किस्ताबन्दिमा र टुर प्याकेज ब्राण्डेड सामानहरु सुपथ मुल्यमा किन्न सकिन्छ। काठमाण्डौ उत्पत्यका भित्र नाईट फुड एण्ड ड्रिंकस् सर्भिस बेलुकी ६ बजेदेखि बिहान साढे ३ बजे सम्म अर्डर गर्न सकिन्छ।